Lasa Mpihira Sy Mpanoratra Hira Fisaonana Ny Filohan’i Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Lasa Mpihira Sy Mpanoratra Hira Fisaonana Ny Filohan'i Kyrgyzstan
Voadika ny 04 Jolay 2016 14:32 GMT
Filoha Kyrgyz Almazbek Atambayev, manao ny asany. Sary an'ny governemanta Rosiana. Nahazoana fahazoandàlana.
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy tamin'ny EurasiaNet.org ito manaraka ito. Naverina navoaka rehefa nahazoana fahazoandàlana.
Mientanentana noho ny fisehoana tampoky ny fampisehoana ny hira mampalahelo nataon'ny Filoha Almazbek Atamabayev tamin'ny Aterineto ny media sosialy ao Kyrgyzstan, ny filoha izay hita ho nisafidy nampiseho ny ilany feno fihetsehampo tao aminy.
Niseho tao amin'ny YouTube ny 2 Jolay ilay hira amin'ny teny Rosiana “Na Eo Aza Ny Lahatra”, ary narahana ny horonantsary Kyrgyz tsy nanana fanantenàna tamin'ny vanimpotoanan'ny Sovietika, “Provincial Romance.”
Tsy niseho nivantana tamin'ilay rakitsary izay nahazo mpijery niisa 75.000 ny 4 Jolay, i Atambayev, fa tsy azo iadiana hevitra ny feony.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety teo an-toerana Kloop.kg, ireo solontena avy tamin'ny trano famokarana Ordo, izay nandrakitra ilay feo, fa ny filoha ihany koa ilay olona mitendry ny gitara.
Hoy i Atambayev tamin'ny feo mitaritarika ao amin'ny fampidirana “Ity ny iray amin'ireo hirako voalohany,” sahala amin'ny hoe miresaka amin'ny mpihaino mavitrika aminà seho an-kira voatokana izy. “Sahala amin'ny vina io amiko. Nanampy ahy hisava làlana tao anatin'ireo olana maro nihatra tamiko tamin'ny fiainako ity hira ity.”
ilay hira roa minitra izay nanaraka dia fahatsiarovana mampalahelo ny famoizana olon-tiana. Milaza ireo “fahatsiarovana toy ny ranonorana mitsitaitaika” ary ny filomanosana toy ny “fanilo mpitarika ny masonao malahelo,” maneho mpandray anjara fototra vesaran'ireo korontana sy alahelo ilay hira, fa tsy ilay mpandraharaha lasa mpanohitra ara-politika izay tafapetraka teo amin'ny fahefàna taorian'ny revôlisôna nihoson-drà.
Nanatsara kokoa ny sanda ireo Filoha hafa tao amin'ny faritra
Eritrereto ny “Miroso, Miroso Ihany, Ry Turkmenistan Firenena Malalako” an'ny filohan'ny Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov — “andiana fakofakom-peo “ethno-disco” tsy ampy resaka fandinihantena sy fanetrentena toy ny lantompeon'i Atambayev anaty haravoana. Ary sarotra ny hahita an'i Atambayev hanelingelina ireo olom-pireneny an'arivony maro, tafiditra amin'izany ireo lehiben'ny mpiasam-panjakana ambony ao aminy, mba hiaraka handray anjara amin'ny fihiràna ny hirany.
Fa ho an'i Atambayev, efatra taona sy tapany taminà fe-piasàna iray maharitra enin-taona amin'ny fitondràna, tsy mbola hanaovana tsangambato volamena ato ho ato izy, toa hita ho tsy nanampy azy hanatsara ny maha izy azy eo amin'ny toerany io.
Toy ny tamin'ny taona lasa, izay nipoahan'ny vaovao fa nanao fanomezana 3.000 dolara nangonina taminà fampirantiana hosodoko tao amin'ny hetsika fiantràna Down Syndrome, ny zanany vavy kely indrindra, Aliya, nanaovan'ireo mpampiasa media sosialy fampitahàna tsara tamin'ny fianakavian'ilay mpitondra teo aloha, Bakiyev, ity farany izay nihoatra ny fangalàrana ny talentany.
“Tato ho ato, nahita Atambayev vaovao aho,” hoy ilay mpampiasa Facebook Aitpasgul Aitpaeva, nanoratra teo amin'ny rindrin'ny mpikambana ao amin'ny parlemanta, Janar Akayev, izay namoaka ilay lahatsarin-kira.
“Tiako kokoa ity Atambayev hafa ity,” hoy izy namarana.
Tsy dia sarotra loatra anefa ny mankafy ny hiran'i Atambayev.
Fanalefahana azo atao an'ny endrika ivelan'ny hoditra manify io, mpanao politika mora tezitra miditra amin'ny resabe diplaomatika ratsy sy manisy ireo vehivavy mpikatroka mafana fo mpiaro ny zon'olombelona eny imasom-bahoaka.
Raha mety maneho ny tenany ho toy ny olon-tiana misaona izay miady amin'ireo ratsy maro i Atambayev, mety ho toerana mahafinaritra kokoa i Kyrgyzstan ankehitriny raha niady mafimafy kokoa izy, ary nirona taminà fanovàna ara-politika ilaina kokoa tao amin'ilay firenena tratran'ny fanambatambarana.
Nanaporofo ny tenany ho lehilahy mitàna ny teniny, raha tsy ny zava-bita, ilay filoha, izay lehibe tao anatin'ny harena tay amin'ny fiandohan'ny taona 1990, tamin'ny fametrahana trano printy Rosiana, mpandika ireo boky Tandrefana nalaza; sy nilaza ho efa naniry ho mpanoratra hatry ny fony kely.
Ary mety mahita ireo tsy tia ny fiandohàn'ny fahombiazany fa misy zavatra nisinisy kokoa tany amin'ny nihavian'ilay izy. Taminà kabarin'ny faran'ny taona, ny taona lasa iny, ilay mpihira fisaonana, izay handray 60 taona amin'ny volana Septambra, dia namboraka fa hieritreritra ny handray piano izy rehefa misotro ronono.
20 ora izayAzerbaijan